‘डेल्टा प्लस’ले बनाउँदैछ भयावह अवस्था ! समयमै सचेतता आवश्यक – List Khabar
Home / समाचार / ‘डेल्टा प्लस’ले बनाउँदैछ भयावह अवस्था ! समयमै सचेतता आवश्यक
admin June 27, 2021 समाचार Leaveacomment 59 Views
‘डेल्टा प्लस’ले बनाउँदैछ भयावह अवस्था ! समयमै सचेतता आवश्यक काठमाडौँ। खोपको अभावमा को’भिड–१९ को तेस्रो लहर आउने अवस्थामा ‘डेल्टा प्लस’ भेरिएन्टले धेरै प्रभाव पार्ने विज्ञहरूले बताएका छन् । हाल नेपालमा दोस्रो लहर फैलिएको डेल्टा भेरिएन्टको अर्को रूप ‘डेल्टा प्लस’ हो ।
Next अब विद्यालयका शिक्षकले दैनिक खाजा भत्ता पाउने